Apple Bhadhara nyika kuMexico nemabhangi akati wandei aripo | IPhone nhau
Apple Bhadhara nyika muMexico nemabhangi akati wandei aripo
Ngirozi Gonzalez | | Apple Pay, Noticias
Apple Pay anga anesu kwemakore manomwe. Kubva payakapihwa muna 2014, nyika zhinji dzawana iyo basa uye akawanda emabhangi uye zvitoro zvakabatanidza chikuva mumakadhi avo uye kubhadhara. Nekudaro, vashandisi mune dzimwe nyika zhinji vachiri vasina chikuva uye havagone kuve nemakadhi avo pane Apple zvishandiso. Nezuro Apple Pay yakamhara muMexico, imwe yenyika dzakakosha muLatin America uko, kusvika mazuva mashoma apfuura, sevhisi yanga isingawanikwe. Kusvika kuri kuburikidza nemabhangi matatu: American Express, Banorte uye Citibanamex.
Mexico pakupedzisira inogamuchira kusvika kweApple Pay
Muna Zvita, Apple yakavimbisa vezvenhau kuti Apple Pay yaizosvika kuMexico mumwedzi inotevera. Mwedzi mishoma gare gare zviri pamutemo: Apple Pay yave kuwanikwa muMexico. Kutenda sevhisi iyi, varume nevakadzi vemuMexico vanoda vachakwanisa kuisa makadhi avo mumidziyo yavo kuti vakwanise kubhadhara munyika yese, munzvimbo dzinozvitendera.
Apple Pay inoshanda nemakadhi echikwereti uye ekubhadharisa emakwirani akakosha ekubhadhara, anoburitswa nemabhangi emunyika akasiyana siyana. Bata chiratidzo chekuwedzera kuwedzera makadhi anotora chikamu kuWallet uye ramba uchifarira mabhenefiti avo uye mibairo nechengetedzo yakakura.
Iyo sevhisi inouya pasi pemabhangi matatu: American Express, Banorte uye Citibanmex. Iwo maviri ekupedzisira anopa Mastercard makadhi uye ndiwo anogona kuiswa mukushandira. Ino yave nguva yemamwe mabhangi kujoina sevhisi uye nekukwanisa kupa hukuru hukuru pakati pemamirioni evashandisi veApple vanogara kuMexico.
Kana iri ruzivo rwepamutemo, Apple yakatovandudza webhusaiti yako nemabhangi anoenderana uye neruzivo rwese rwakanangana neApple Pay iyo inofanirwa kuziva mushandisi. Tichaona kana mumwedzi iri kuuya dzimwe nyika dzeLatin America dzichabatana nebasa rinoitwa nemabhiriyoni evashandisi zuva nezuva.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » Noticias » Apple Bhadhara nyika muMexico nemabhangi akati wandei aripo
Luis Daniel akadaro
Mhoro!! Sekucherechedza isu tiri maMexico / maMexico ane X
Pindura kuna Luis Daniel
Kwakanyorwa kuti "maMexico."
Chishongedzo Mugadziri Anker Inoburitsa MagSafe Inoenderana Inotakurika Bhatiri